Indlu yelali yabantu aba-4
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguCorinne
Indlu yelali esePechabou. Indawo yakho yokuhlala kukuhamba imizuzu eli-10 ukusuka kwiCanal du Midi, uhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka kwindawo yokubhaka kunye nemizuzu eli-15 yokuhamba ukusuka kwiziko elineevenkile ezininzi.
Kumasango e-Ariège (i-37mn esuka eMazeres) kunye ne-Toulouse Capitole (i-25mn) unokufumanisa ubuncwane be-Pyrenees.
Le ndlu ifanelekile zombini ukuhlala ngobuchwephesha kunye nezixhobo zobuchwephesha kodwa nokuba nexesha elimnandi kunye nosapho okanye nabahlobo ngexesha langokuhlwa ezolileyo malunga neziko.
Kwindawo enoxolo kakhulu kwisikwere selali yeLauragais eqhelekileyo, imizuzu emi-5 ukusuka kwindawo yokubhaka kunye nekhemesti, unokufikelela kwiNdawo yeCapitole ngebhasi kunye ne-metro ngemizuzu engama-27.
Ixhotyiselwe umsebenzi okude kunye nesikrini se-visio kunye nomshicileli.
Kwaye inendawo yomlilo kwigumbi lokuhlala kwezo ngokuhlwa zipholileyo zasebusika.
Ukuba ufuna ukufumana iCanal du Midi, uya kuhamba usuka endlwini ecaleni kwendlela enemithi eya kukuthatha kwimizuzu eli-10 ukuya kwiindonga zayo ezigutyungelwe yimithi yenqwelomoya emihle eqhelekileyo kwingingqi yethu.
Ukuba uza ngenxa yezizathu zobuchwephesha, sikufutshane kwaye singenazo iitrafikhi kwiindawo zeCastanet kunye neLabège okanye kwimetro eyakusa kumbindi wedolophu okanye eBlagnac.
Ihlala ifumaneka ngefowuni yakho elula, i-imeyile okanye umyalezo obhaliweyo, ndiza kubuyela kuwe ngeyure.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pechabou